Le yi-TAG Heuer entsha exhunyiwe, i-smartwatch entsha yokunethezeka evela enkampanini yaseSwitzerland | Izindaba zamagajethi
Esikhathini esingaphezudlwana kwenyanga edlule, inkampani yokubuka okunethezeka yaseSwitzerland i-TAG Heuer yamemezela ukuthi yayisebenza esizukulwaneni sesibili se-smartwatch sayo, i-smartwatch ebesedlule konke okulindelwe ukuthengiswa kwenkampani ngokuthengisa amayunithi angaphezu kwama-50.000 XNUMX, impumelelo ephelele uma ucabanga izibalo zokuthengisa zalolu hlobo lwedivayisi kanye nentengo yale modeli, efike kuma-euro angu-1.350. Isizukulwane sesibili sale smartwatch kanokusho sibizwa nge-TAG Heuer Connected Modular, i-smartwatch, njengoba igama layo likhombisa, esivumela ukuthi siyenze ngezifiso ngokusebenzisa imichilo ehlukene, amabhakede, izindawo zokubuka namabhokisi, ingxenye yobuhle kakhulu yedivayisi.
Ngenxa yamathuba ahlukahlukene wokwenza ngokwezifiso, i- I-TAG Heuer Modular Connected Modular isinikeza izinhlanganisela ezifika ku-500 ezahlukahlukene ngaphandle kokubala ezinhlakeni zayo zangaphakathi, kuphela kule modeli. Uhlelo lokubopha imichilo lususelwe kuthebhu okuthi lapho uyiphakamisa isivumele ukuthi sisuse umucu kalula. U-He Heuer uphinde wethembela ku-Intel ukuthi athuthukise isizukulwane sesibili sale smartwatch kanokusho ngoba ngaphakathi sithola iprosesa ye-Intel Atom Z34XX, kanye ne-4 GB ye-RAM, 512 MB, isikrini esingu-1,39-intshi ngesisombululo 400 × 400, GPS, NFC kanye ne-Wifi.
Vele, le modeli entsha izongena emakethe nge-Android Wear 2.0. Ukuba yidivayisi ebhekiswe emphakathini okhethwe kakhulu futhi edinga ikhwalithi kumadivayisi abo, le modeli iphinde isebenzise isafire ukuvikela insimbi, u-2,5-millimeter-sapphire crystal evikela isikrini se-AMOLED kunoma yikuphi ukushayisana ngengozi esingakwenza. Mayelana nentengo okwamanje umenzi akakhiphanga ngedatha, kepha intengo yayo yokugcina kungenzeka ibe ngaphezulu kunemodeli yangaphambilini ngenxa yezinketho ezihlukile zokwenza ngokwezifiso lokho kusinikeza, ngaphandle kokubheka intengo yesakhi ngasinye, esithengiswa ngokwehlukile.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Gadgets » SmartWatch » Le yi-TAG Heuer entsha exhunyiwe, i-smartwatch entsha yokunethezeka evela enkampanini yaseSwitzerland
Ukumelana neNokia 6 entsha kuvivinywa [Ividiyo]
I-Intel itshala imali eyi-15.300 billion enkampanini yokushayela ezimele